Public Kura | » महिलाले आफ्नो शरीरमा हुने क्यान्सरलाई कसरी पहिचान गर्ने ? महिलाले आफ्नो शरीरमा हुने क्यान्सरलाई कसरी पहिचान गर्ने ? – Public Kura
महिलाले आफ्नो शरीरमा हुने क्यान्सरलाई कसरी पहिचान गर्ने ?
– ज्ञान चतुर्वेदी
यो लेखमा हामी ती क्यान्सरहरुको बारेमा कुरा गर्नेछौं, जुन केवल महिलाको शरीरमा हुन्छ। अन्डाशय, पाठेघर र पाठेघरको मुख (फ्यालोपियन ट्युब) मा हुने क्यान्सर महिलाको शरीरमा मात्रै हुन्छ।